Akụkọ - ewebatala usoro nrụpụta DUTTILE IRON ma na -arụ ọrụ kemgbe 2021
Akụkụ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ
Ụgbọ ala ala
Onye na -arụ ọrụ
Sochie njikọ Assir
Track akpụkpọ ụkwụ
Okwu mmalite otu
Omenala ụlọ ọrụ & Akụkọ ihe mere eme
Ewebatala usoro nrụpụta DUTTILE IRON ma na -arụ ọrụ kemgbe 2021
Ụlọ ọrụ Ductile Iron hiwere kemgbe 2021
1. Okwu mmalite:
Ductile cast iron bụ ihe nkedo siri ike siri ike mepụtara na 1950. Ọrụ ya zuru oke dị nso na nke nchara. Dabere na arụmọrụ ya dị mma, ejirila ya mee ihe nke ọma iji mee ụfọdụ ike dị mgbagwoju anya yana na -achọsi ike, ike, na iguzogide ike. Ductile igba ígwè ngwa ngwa mepụtara n'ime nkedo ígwè ihe nke abụọ naanị isi awọ nkedo ígwè na ọtụtụ -eji. Ihe a na-akpọ '' nnọchi igwe maka nchara '' na-ezo aka na igwe ductile. Igwe ihe nkedo ductile na -enweta graphite ductile site na spheroidization na ọgwụgwọ inoculation nke na -emezi ka arụ ọrụ nke ígwè siri ike, ọkachasị plastik na ike, si otu a nweta ike dị elu karịa nchara carbon.
2. Ịrụ ọrụ:
Ọ fọrọ nke nta ka ejirila ihe nkedo ductile mee ihe na ngalaba ụlọ ọrụ niile, nke chọrọ ike dị elu, plastik, ike, na -eyi nguzogide, nguzogide oke ọkụ na igwe, nkwụsi ike dị elu ma ọ bụ dị ala, nguzogide corrosion na nkwụsi ike akụkụ. Iji zute mgbanwe ndị a na ọnọdụ ojiji, iron ductile nwere ọtụtụ akara ule, na -enye ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ na anụ ahụ.
Ngwongwo ductile cast iron spare parts for undercarriage, like the end cover for rola rola, collar for track roller, bracket for the idler
5. Ike mmepụta: 500-550T/Ọnwa, ahịrị mmepụta akpaghị aka.
1) Tụnyere nkedo ígwè, ductile cast iron nwere uru zuru oke n'ike. Ike ọdụdọ nke ductile cast iron bụ 60k, ebe ike ọdụdọ nke nkedo ígwè bụ naanị 31k. Ike mkpụrụ nke ductile cast iron bụ 40k, ebe nkedo anaghị egosi ike mkpụrụ na n'ikpeazụ gbajie. Ike-na-eri ruru nke ductile ígwè dị nnọọ elu karịa nke nkedo ígwè. Ike nke ductile ígwè bụ nke yiri nkedo ígwè.
2) Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nkedo nchara, ihe nkedo ductile nwere ike ịmị mkpụrụ dị elu, karịa nchara nchara. The ala na -eri nke * Tụkwasị graphite igba ígwè na -eme ka ihe a ọzọ ewu ewu, nkedo arụmọrụ dị elu, na machining na -eri nke * Tụkwasị graphite nkedo ígwè na -ebelata.
3) Ya mere, mgbe emechara akụkụ nrụgide nke ihe nkedo ductile site na njikọta mmiri na-eme nri, usoro okirikiri dị n'ime ihe nkedo ductile nwekwara ike wepu ihe mgbawa nke flake graphite dị n'ime nkedo dị mfe imepụta. Na microphotograph nke eriri ductile, enwere ike ịhụ mgbawa na -akwụsị mgbe ha rutere bọọlụ graphite. N'ime ụlọ ọrụ ductile iron, a na -akpọ bọọlụ graphite ndị a "ndị na -akwụsị mgbawa" n'ihi ike ha nwere igbochi mgbochi mgbaji ọkpụkpụ.
Oge ezipụ: Jun-17-2021
Nke 20 Shangtang Changtai Shudou Licheng Quanzhou Fujian.
Copyright - 2020-2021: Edebere ikikere nile.